अनामणिको “खस्राे हातहरू” कबिता संग्रह पढेपछि::KhojOnline.com
-तारा के.सी.,टोखा न.पा. गोंगबु
साहित्यकाे विविध विधामा कलम चलाएर नेपाली साहित्य फाँटमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल एउटा परिचित नाम हाे रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठ। सायद धेरै बर्ष पहिले नै हाे । ठायक्कै मिति सम्झिन सकिन । जनमतकाे कार्यक्रम हुँदै गर्दा बनेपामा हल बाहिर बिक्रीमा राखेका कितावहरू नियाल्दै गर्दा दाउहरू फरक फरक गजल संग्रहमा मेराे अाँखाहरू ठाेकिन पुगेका थियाे। सम्झिए, माेहन दुवाल सरले म गाेङ्गबु बस्छु भन्दा भन्नू भाकाे थियाे। रत्नप्रसाद अनामणिसँग परिचय छ कि छैन। उनि पनि गाेङ्गबु बस्छन्। चाेकै नजिक पसल छ।कहिले काहीँ बजार जाँदा अाउँदा उहाँकाे पसलतिर हेर्थे। म्याडम् बस्नु हुदाे रहेछ । उहाँलाई देखिएन कहिले पनि।नामै काफी किने गजल संङ्ग्रह। पढे सारै राम्रा गजलहरू रहेछन्। त्यति बेला सम्म मैले रत्नप्रसाद अनामणि सरलाई देखेकाे थिइन। सायद ४ बर्ष अघि गाेङ्गबु साहित्य समाज गठन भएपछिकाे पहिलाे कार्यक्रममा नियात्राकार कवि दामाेदर पुडासैनी सरले कार्यक्रमा बाेलाउनु भएकाे थियाे मलाई गाेङ्गबुमा। त्यतिखेर नै हाे मैले रत्नसरसँग चिनेकाे। हामी तीन जना भेटियाै काभ्रेकाे त्याे कार्यक्रम मा म , रत्न सर र महारथि तेजप्रकाश बानियाँ सर!सारै खुशि लाग्याे। उहाँहरूसित भेट हुदाँ। अचेल रत्नसरकाे घर साहित्यिक चाैतारी बनेकाे छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँकै घरमा हुने गर्छ। उहाँकाे घरमा साहित्यिक जमघट हुन्छ।मिलनसार र नम्र स्वाभाव भएकाे कारणले उहाँ सबैकाे अाँखाकाे नानी हुनुहुन्छ। प्रा.डा. गार्गी शर्मा दिज्यूले त उहाँलाई साहित्यिक नाम राख्दिनु भएकाे छ रत्नमणि भनेर।
उहाँले गाेङ्गबुमा एउटा साहित्यिक परिवार नै खडा गर्नु भएकाे छ। बहुप्रतिभाका धनि रत्नप्रसाद अनामणिकाे जन्म उग्रचण्डी नाला बनेपा ४ मा पिता लाल बहादुर श्रेष्ठ र माता जनक माया श्रेष्ठकाे काेखबाट वि.सं २०२६/६/६ मा भएकाे थियाे। उहाँले एम.ए( नेपाली) बि.एड र हाल भक्तपुरकाे लाेक साहित्य परम्परामा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ। श्रीमती र दुई छाेराहरूसित टाेखा न. पा ९ गाेङ्गबुमा बस्दै व्यापार ब्यवसाय चलाउदै अाउनु भएका अनामणि सरका प्रकाशित कृतिहरूमा:- १. बिधा हाइकु संङ्ग्रहमा: १. शब्द पथमा २.दुखेकाे घाउ ३.लय् लगु किपा २. बिधा मुक्तक संङ्ग्रह १.फूलकाे मनया लागेपछि २.मेराे गाेरेटाेमा तिम्राे छायाँ ३.भाे तस्विर नखिच ३. बिधा गजल:- १.दाउहरू फरक फरक २.ख्याल ख्यालमै सल्क्याे जिन्दगी ४.बिधा:- कविता १.लाज हराएका मान्छेहरू २.खस्राे हात ५. अनामणिका भूमिकाहरू भाग – १ ६.लेख संङ्ग्रह :- यम्ह ध्याे( ऐतिहासिक लेख) नास ध्याे(ऐेतिहासिक लेख) पत्रकारिता,भाषण कला१०१ गीता सार ,एक कप चिया ३० दिनमा अग्रेजी, गौतम बुध्द जीवनी।उहाँका हाल सम्मका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। एकछिन् चुप लागेर न बस्ने केहिन केहि लेखेर सृजनामा रमिरहने रत्न सरकाे थुप्रै गीतहरू पनि विभिन्न संचारमाध्यबाट सुनिदै अाएकाे छ। उहाँले सम्पादन गरेका पत्रपत्रिकाहरूमा:-चुट्किला संङ्ग्रह भाग – १ चुट्किला- २ स्पन्दन हवाई मासिक भिन्तुना( भित्रे पत्रिका) प्रदीपिका अंक १ र अंक २ जुनिय रेडक्रस स्मारिका (काभ्रे) नव प्रतिभा मासिक उग्रचण्डी नालाकाे अभिलेख संङ्ग्रह गाेङ्गबु व्यापार स्मारिका , जल अावाज अादि नेपाली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाए वापत उहाँले दिपज्याेति सम्मान लगाएत डेड दर्जन सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएकाे छ।
खस्रा हातमा पन्ध्रवटा कविताहरू सङ्कलित छन्। अाकारमा यी रचना लामा छाेटा दुबै खाले छन्। सबै कवितामा समसामयिक र मार्मिक बिषय सन्दर्भलाई उठाइएकाे छ। जीवन मानिसले साेचे जस्ताे सरल सहज, अनुकुल र अानन्ददायी मात्र छैन हुदैन पनि। मुक्तलयमा उनिएका प्रस्तुत कवितामा ब्यङ्गग्यभावकाे तीब्रता भेटिन्छ। प्रबल व्यङ्ग्य भावकाे कारण कविताहरू अाकर्षण लाग्दछन् ।
कवि रत्नले अाफुभित्र रहेकाे देशप्रेम जनप्रेमी संस्कृति र सभ्यताप्रेमी भावनालाई मार्मिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएकाे पाइन्छ। यहि नै खस्राे हात कविता संङ्ग्रहकाे वैशिष्ट्य हाे । कवि स्वभावैले न्यायप्रिय सत्यवादी समानता चहाने हुन्छन्।हाम्राे समाज भेदभावपूर्ण छ। राष्ट्रिय राजनिति स्वार्थपुर्ण छ, दिशाहिन छ। यस्ताे देखेपछि कविलाई सहन गाह्राे पर्छ। कविले मार्मिक शैलीमा अभिब्यक्ति दिएर पाठककाे मन तान्ने विशेष प्रयास गरेकाे बुझिन्छ। कविता चाह‌ दिदीकाे भान्सामा लेखियाेस् चाहे किसानकाे खेतमा चाहे राजनिति रंगमञ्चमा चाहे तिजकाे राैनकमा! नेपाली रंङ्गले पाेतिएका जिवननका विविधताका इन्द्रेणीहरू तिनमा निहित रहेकाे मैले पाएँ भनेर डा. श‌लेन्दुप्रकाश नेपालले खस्राे हातकाे भुमिकामा लेख्नु भएकाे छ। बास्तवमा याे खस्रा हात बिद्राेही कविताहरूकाे संङ्ग्रह भने पनि हुन्छ। यसभित्र देशप्रेम शासन , सभ्यता, संस्कृतीलाई विशेष जाेड दिएकाे छु। हुनेखाने भन्दा हुदाँ खानहुदाँ खानेकाे पक्षमा उभिएर कविताहरू लेखेकाे छु। याे कवितामा मैले बाेल्नु भन्दा पनि पाठकहरूले नै प्रकाश पारिदिनु हुनेछ भन्ने अाशामा छु भनेर कवि स्वयम् रत्नप्रसाद अनामणि ज्यूले अाफ्नाे भनाईमा प्रकाश पार्नु भएकाे छ। समग्रमा याे कविता पढ्दा कविताकाे रसस्वादन गर्ने पाठक ज्यूहरूले नयाँ स्वादकाे अनुभव लिनु हुने छ। कविताभरि अाफ्नै समाज परिवेश र राष्ट्र दुखेकाे पाइन्छ। मेराे तर्फबाट पनि कविलाई याे कविता संङ्ग्रहकाेलागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना! अन्तमा,खस्रा हात कविता संङ्ग्रहलाई गाैरी पब्लिकेशनले प्रकाशनमा ल्याएकाे हाे। अाबरण/ लेअाउट अस्मिता कडेलकाे रहेकाे छ भने यसकाे मूल्य रू ५१ रहेकाे छ।